किन पर्छ बच्चा जन्मदै मुटुमा प्वाल…. जानकारीको लागि सबैले सक्दो सेयर गरौं – aajnepal
HomeHealthकिन पर्छ बच्चा जन्मदै मुटुमा प्वाल…. जानकारीको लागि सबैले सक्दो सेयर गरौं
किन पर्छ बच्चा जन्मदै मुटुमा प्वाल…. जानकारीको लागि सबैले सक्दो सेयर गरौं
गर्भमा ३ महिना पुग्दा नपुग्दै बालकको मुटुको निर्माण भैसकेको हुन्छ । शिशुको विकासको प्रथम ३ महिनाभित्र कुनै कारणले मुटुको विकासमा गडबडी भएमा बालकलाई जन्मजात मुटुरोगी बनाउँछ ।कति कारणले शिशुको मुटुमा यस्ता विकृति देखा पर्न सक्दछन् भन्ने कुरा पूर्णरुपले जानकारीमा नआएको भए पनि यसबारे केही तथ्य पत्ता लागेका छन् । गर्भधारण गरेको ३ महिनाभित्र रुबेला नामक एक किसिमको दादुराजस्तै रोग लाग्यो भने यसले शिशुको निर्माण भैरहेको मुटुमा विकृति उत्पन्न गराउँछ ।
यस्तै प्रकारकाले गर्भधारण गरेको ३ महिना भित्रमा गर्भको लागि असुरक्षित मानिएका औषधि सेवन गरेमा, अत्याधिक धूमपान र मध्यपान गरेमा, शरीरमा एक्सरेको विकीरण परेमा आदि अवस्थामा मुटु निर्माणमा गडबडी हुन सक्छ । गर्भवती अवस्थामा आमाले खाने गरेको भोजनले पनि विषेश महत्व राख्छ ।भोजनमा भिटामिन र अन्य आवश्यक पोषण तत्वको कमी भएमा पनि गर्भवतीले त्रुटिपूर्ण विकास भएका शिशु जन्माउँछन् । कहिलेकाँही एउटै परिवारका भाइबहिनीमा पनि मुटुसम्बन्धी जन्मजात विकृति देखिन सक्छन् । यस्तो हुनुमा वंशाणुगत दोष रहेको हुन्छ ।मुटुमा हुने जन्मजात विकृतिमध्ये मुटुमा प्वाल पर्ने समस्या धेरै देखिने गर्छ ।
केही शिशुमा मुटुको दाहिने र देब्रे भाग छुट्याउने बीचको भित्तामा प्वाल भएको पनि पाइन्छ । मुटमा प्वाल पर्ने समस्या भनेको यही हो । प्वाल भने मुटुको बाहिरी भागमा पर्छ ।यो प्वाल मुटुको दाहिने र देब्रे भाग छुट्याउने भित्तामा पर्छ । यो त्रुटीका कारण उत्पन्न हुने लक्षण र गम्भीरता प्वाल कुन ठाँउमा र कति ठूलो छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । मुटुको माथिल्ला साना कोष्ठ छुट्याउने भित्तामा हुने प्वाल (जसलाई एट्रिए सेप्टल डिफेक्ट भनिन्छ) कम खतरनाक हुन्छन् ।
यो प्वाल सानो छ भने कुनै उपचारको आवश्यकता नपर्न पनि सक्छ । यस्तो मुटु भएका शिशु कुनै समस्याविना नै पूरा आयु बाँच्न सक्छन् ।मुटुको तल्लो भागका ठूला कोष्ठलाई छुट्याउने भित्तामा पनि प्वाल हुनसक्छ । यस्तो प्वाल बढी नै खतरनाक हुन्छ । साना आकारको भए पनि यो प्वाललाई शल्यक्रियाद्वारा टाल्नु सकिन्छ । मुटुमा हुने यस्ता प्वालले गर्दा मुटुभित्र चाप बढेर मुटुको दाहिने भागमा सञ्चालन हुने अशुद्ध रगत र बाँया भागमा सञ्चालन हुने शुद्ध रगत आपसमा मिसिन जान्छ । यसले रोगका विभिन्न लक्षण देखा पर्छन् ।